बाम गठबन्धनलाई ठूलो सकस : दाङ २ मा शंकर कि महरा ?
Saturday, 28 Oct, 2017 2:18 PM
केही वर्ष अघिको कुरा हो । सर्वोच्च अदालतसँगै जोडिएको नेपाल बार एशोसिएशनको कार्यालयको माथिल्लो तलाको सभाकक्षमा कुनै पुस्तक विमोचनको कार्यक्रम थियो । प्रमुख अतिथि थिए नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतम र पुस्तकमाथिको टिप्पणीकर्ता थिए एमालेका युवा नेता शंकर पोखरेल ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै पोखरेलले जननेता मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनबादको लामो व्याख्या गरे । उनीपछि लगतै गौतमले भाषण गरे । गौतमले आफ्नो भाषणको प्रारम्भ शंकर पोखरेलको वैचारिक दक्षताको प्रशंसाबाट थाले । मलाई सम्झना छ, त्यसबेला गौतमले पोखरेलबारे भनेको कुरा । गौतमले भनेका थिए, ‘शंकर पोखरेलले एक दिन एमालेको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । उनी एमालेको सिद्धान्त र कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादको राम्रो व्याख्या गर्नसक्ने नेता हुन् ।’
गौतमले अगाडि थपे, ‘नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सन्दर्भमा शंकर पोखरेलसहित हामी भूमिगतरुपमा प्रचण्डसँग कुरा गर्न गएका थियौं । त्यहाँ शंकर कमरेडले गरेको तर्क सुनेर प्रचण्डले पनि उहाँको निकै प्रंशसा गर्दै एक दिन यी मान्छे एमालेमा ठूलै नेता हुनेछन् भनेका थिए ।’
गौतमले आफ्नो प्रशंसा गरेको सुनेर पोखरेल भने लजाइरहेका थिए ।
तिनै शंकर पोखरेल अहिले एमाले स्थायी समिति सदस्य छन् । एमाले र माओबादीले भविश्यमा पार्टी एकता गर्ने र अहिले चुनावी सहकार्य गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यसक्रममा गठित निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड कार्यदलमा पनि उनी सदस्य छन् । दुबै दलबीच ६० र ४० प्रतिशतका दरले क्षेत्र निर्धारण गरेका छन् । दुई पार्टी एकतामा संवेदनशील भूमिका भएका पोखरेलले आफ्नै लागि भने निर्वाचन क्षेत्र टुंगो लगाउन सकेनन् । अर्थात्, उनलाई आफ्नो क्षेत्र टुंग्याउन दिइएन । आवश्यकता भन्दा बढ्ता शालीन र केही अन्तरमुखी स्वाभावका जस्ता लाग्ने पोखरेल औपचारिक कार्यक्रममा राम्रा वक्ता र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरुमा राम्रा शिक्षक हुन् । त्यसो त उनी पार्टी अध्यक्ष ओली आफैं प्रमुख रहेको एमालेको स्कूल विभागलाई नियमित राजनीतिक कक्षाको रुपमा हाँक्ने उपप्रमुख हुन् ।
अहिले दाङको क्षेत्र नम्बर २ बाट पोखरेललाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार बनाउन सिंगो दाङ एमालेले जोडदार माग गरिरहेको छ । गत स्थानीय चुनावमा पूरै समय दाङमा विताएर चुनावी नतिजा पार्टीका पक्षमा पार्न सफल पोखरेललाई स्थानीय जनता पनि दाङबाट संसदमा पुगेको देख्न चाहन्छन् । तर, पार्टी एकताको नाममा अहिले उनलाई ‘शहीद’ बनाउन खोजिदै गरेको अनुभुती दंगाली एमालेको छ । अर्थात्, उनलाई संघमा होइन, प्रदेशमा चुनाव लड्न दबाब दिईदैछ । उनलाई ५ नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने गरी प्रदेशसभामा चुनाव लड्न भनिंदैछ । जुन न पोखरेलको न त एमालेको ठूलो पंक्तिको रुची हो । तर पनि पोखरेललाई एकताको नाममा प्रदेशमा पठाएर पार्टीको वैचारिक नेतालाई प्रदेशमा खुम्च्याउन खोजिएको आम अनुभुती देखिएको छ ।
अनेरास्ववियूको अध्यक्ष हुँदा शंकर पोखरेलले विद्यार्थी आन्दोलनको जुन रुपरेखा कोरेका थिए, आजको अखिल अहिले पनि त्यसमै डोरिएको छ । ०५९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न एमालेको सातौं महाधिवेशनमा पोखरेलले माओबादीको सशस्त्र विद्रोहको समाधान गर्न एमालेले संविधानसभाको लाइन लिनुपर्ने लिखित दस्तावेज नै दर्ज गराए । तर उनको त्यो दस्तावेजलाई बहसमा सम्म लान नदिएर त्यसै थन्क्याइयो । अन्ततः दोस्रो जनान्दोलनसम्म नपुग्दै एमाले त्यही संविधानसभाको लाइनमा आइपुग्यो ।
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा दाङ छोडेर रोल्पा रोजेका माओवादी नेता महरा गत स्थानीय निर्वाचनमा एमाले नेता शंकर पोखरेलले मेहेनतपूर्वक जनमत बनाएको दाङ २ ताक्दै फर्केपछि पोखरेलमाथि अन्याय भएको ठान्ने ठूलो जनमत देखिएको छ ।
बुटवलमा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनबाट सचिवमा निर्वाचित पोखरेल नवौं महाधिवेशनमा केपी ओलीले नेतृत्व गरेको समुहबाट उपमहासचिवको उम्मेदवार थिए । ओलीसहित केही पदाधिकारी र बहुमत सदस्य निर्वाचित हुँदा राम्रो भविष्य बोकेका एक युवा नेता पोखरेल भने पराजित भए । उनलाई त्यसबेला जानाजान पराजित गराइएको कुरा एमाले पंक्तिमा चर्चा चल्नेगर्छ । वैचारिक राजनीतिमा चुनौतीहीन बनेका पोखरेललाई सांगठनिक हैसियत पनि त्यस्तै भयो भने आफू असुरक्षित हुने भयका कारण पनि उनी पार्टीका आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा शिकार हुने गर्छन् भन्ने बुझाई एमाले भित्र छ । तर पनि आफूलाई पराजित गर्नेहरुसँगै मिलेर पार्टी हितमा अघि बढ्ने पोखरेलको स्वभाव छ । आज पोखरेललाई संघीय संसदमा आउनबाट रोक्न खोज्नेले नै नवौं महाधिवेशनमा उपमहासचिव पदमा पराजित गर्न भित्री भूमिका खेलेको एमाले पंक्तिमा चर्चा चल्न थालेको छ ।
शंकरमाथि कसरी गरिदैछ अन्याय ?
कुनै बेला कांग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काको जगजगी रहेको दाङमा ०५१ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका बेला शंकर पोखरेलको ज्यान लिने गरी गोली चलाईएको थियो । त्यसलाई बिजौरी हत्यकाण्डका रुपमा चिनिन्छि । त्यसबेला पोखरेल भाग्यले बाँचे । आज उनीमाथि भित्रैबाट प्रहार गर्न खोजिदैछ ।
दाङको अहिलेको क्षेत्र नम्बर २ पहिलाको क्षेत्र नम्बर ४ को आधा भाग मिलेर बनेको छ । ५१ सालमा उनी क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित भए । ०६४ सालमा भएको संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा उनलाई टिकट दिइएन । त्यसबेला उनी क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बन्न चाहेका थिए । तर उनको सट्टा युवराज ज्ञवालीले टिकट पाए । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा त्यस क्षेत्रबाट माओबादीका कृष्णबहादुर महरा चुनाव लडेका थिए । उनले ज्ञवालीलाई पराजित गरे । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा महरा दाङ छोडेर रोल्पा रोज्न पुगे । त्यसबेला दुईवटा क्षेत्र रहेको रोल्पाबाट महराले जिते ।
अहिले फेरि महराले दाङको क्षेत्र नम्बर २ ताकेका छन् । किनभने, रोल्पामा अहिले संघीय संसदका लागि एउटा मात्र क्षेत्र छ, जहाँबाट माओबादीका वर्षमान पुनले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन् ।
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा दाङमा नेकपा एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउन पोखरेलको खटाई अतुलनीय रहनपुग्यो । दाङका दुई उपमहानगरपालिका तुलसीपुर र घोराहीमा एमालेले विजय गर्यो । स्थानीय निर्वाचनका बेला दाङमा उनले पार्टीको कमाण्ड नै सम्हालेका थिए । दाङको १० स्थानीय तहमध्ये ६ वटामा प्रमुखसहित एमाले विजयी हुनुमा पनि उनको कम्ता योगदान छैन । तर आज उनैलाई त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुनबाट रोकिदैछ । यसले उनीमाथि अन्याय भयो भन्ने जमात ठूलो छ ।
पछिल्लो पटक दाङबाट जित्न नसक्ने भएपछि रोल्पा सरेका माओवादी नेता महराले आज शंकर पोखरेलहरुले बलियो बनाएको दाङको क्षेत्र नम्बर २ नै चाहिएको छ । महरालाई एमालेले क्षेत्र नम्बर १ मा निर्वाचन लड्न आग्रह गर्दै आएको छ । महराले २ नम्बर क्षेत्रमा चुनाव लड्न नपाए घरमै बस्ने भनी टिप्पणी गरेका छन् । महराको यो अभिब्यक्तिले दुई पार्टीको एकताप्रति संवेदनशीलता लाई बहन गर्न सक्दैन । त्यसमाथि स्थानीय तहको निर्वाचनको मतपरिणामको आधारमा हेर्ने हो भने २ नम्बर क्षेत्रमा एमालेको २३ हजारको हाराहारीमा मत छ भने माओबादीको करिब १७ हजार छ । कांग्रेसको करिब २१ हजार छ ।
क्षेत्र नम्बर १ मा महरा लड्ने हो भने उनको जित पनि सुनिश्चित नै छ । नेताको व्यबस्थापन गर्ने नाममा महरालाई २ नम्बर दिएर शंकरलाई १ नम्बरमा लानु पनि एउटा उपाय हुन सक्छ तर त्यो एमाले–माओवादी गठबन्धनको हितमा हुँदैन । किनभने आफ्नो क्षेत्र छाडेर १ मा आयो भन्ने भगुवाको आरोप पोखरेलमाथि विपक्षीले लगाउने छन् । जसका कारण निर्वाचन फेस गर्न गाह्रो हुनेछ । त्यस्तै दाङ छोडेर रोल्पा पुगेका र अहिले फेरि दाङकै २ नम्बरमा लड्न आउने महरालाई पनि भगुवाको आरोप लाग्नेछ । महरालाई २ नम्बर दिएर दुई भगुवाको आरोप स्वीकार्ने कि उनलाई १ नम्बर दिएर एक मात्र भगुवाको आरोप सह्ने ? आगे एमाले–माओबादीले जानुन् ।